निसाना छेक्न ओलीको ‘मौनता’, बैठकमा रित्ताे कुर्सी ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > राजनीति > निसाना छेक्न ओलीको ‘मौनता’, बैठकमा रित्ताे कुर्सी !
June 27, 2020 GRISHI180
काठमाडौं : नेकपा स्थायी समिति बैठकमा शुक्रबार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने केही सदस्यको तयारी थियो। पार्टी/सरकार दुवैको नेतृत्वकर्ताका रूपमा उनीमाथि खनिने गृहकार्य पूरा भएको थियो। तर, त्यो विषयले तब छिर्नै पाएन, जब ओली बैठकमै अनुपस्थित भइदिए।
जब प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र निसानामा पारिन्छन्, कुनै न कुनै उपायद्वारा उनी त्यसलाई पन्छाउँछन्। लामो प्रयासपछि बोलाइएको स्थायी समितिमा त्यही झल्को मिल्यो। आफूमाथिको सम्भावित आलोचना उनले मौनतामै पन्छाइदिए। ,याे खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।
काम अगाडी बढाइसकेपछि एमसीसी स्थगित गर्न मिल्दैनः पूर्वअर्थसचिव खनाल
नेकपा विवाद : चेपुवामा प्रचण्ड !
July 11, 2020 July 11, 2020 GRISHI